Maalinta: Sebtember 13, 2019
Khadka Malatya Diyarbakır Inta u dhaxaysa Fur Gezin Stations Auction
Malatya Diyarbakır Line Fur Walk Stations Km: 380 + 550-380 + 950 Dhoofinta Inta U dhaxaysa Natiijada Tender Resins State Railways 5. Agaasinka Iibsiga Gobolka (TCDD) ayaa xaddidaya qiimaha 2019 / 392548 GCC 284.148,83 TL iyo qiyaastii. [More ...]
Maanta taariikhda: 14 September 1908 Anatole iyo Orient
Maanta taariikhda 14 Sebtember 1908 shaqaalaha Anatolian iyo Oriental Railway waxay ku dhaqaaqeen shaqo joojin. Shaqaaluhu waxay codsadeen inay yareeyaan saacadaha shaqada laga bilaabo 10,5 illaa saacadaha 8,5. Shirkadda waxay kicisaa boqolkiiba 20 shaqaalaha mushaarka qaata iyo nus [More ...]
Dhoofinta Maraakiibta Caalamka
Maraakiibteenu waxay soo saareen dakhli dhoofinta 990.5 milyan oo doolar sanadkii la soo dhaafay. Dhoofinta warshadaha dib-u-dhiska maraakiibta shanta bilood ee ugu horreysa ee sanadkan waxay ku kacayaan 435.7 milyan oo doolar. Sannadkan, maraakiibtayada [More ...]
Ordu waa inay sida ugu dhakhsaha badan ula soo gaadhaa Samsun Sarp Railway
Büyük Ordu waa inuu la xiriiraa Samsun-Sarp Railway sida ugu dhaqsaha badan, ayuu yiri Ömer Aydın, Madaxweynaha Golaha Magaalada Caasimadda ee Ordu. Ganacsigan, dalxiis, dalxiis, jaangooyooyinku waxay ku noolaan doonaan fasalka. ” RAILROAD wuxuu siiyaa Xeerarkii ORDU [More ...]
Wasiirka Turhan, hadlayay mar uu booqday Erzurum Governor, Gaadiidka iyo Wasaaradda Kaabayaasha iyo iskaashiga Midowga Yurub ee "helitaanka Adeegyada Gaadiidka Rakaabka ee Turkey Project Erzurum in Workshop Action" Wuxuu sheegay in uu magaalada soo gala si ay ugu biiraan yimid. [More ...]
World Championship stadian Magaalada Eldoret oo ka mid ah Madaxtooyada, degmada Afyonkarahisar oo loo buuxiyo kaashanaya Turkey Baaskiilka Federation, isku mar lala horyaalka NG Afyon Sport iyo Baaskiilka Festival ayaa soo jiitay weyn. madaxtooyada [More ...]
Diyaargarowga Bandhigga Caalamiga ah ee Baaskiilka Alanya, oo la qaban doono markii labaad sannadkan, ayaa la bilaabay. Bandhigga, oo markii ugu horreysay lagu qabtay Alanya sanadkii la soo dhaafay, wuxuu albaabada u furi doonaa kuwa jecel baaskiilka. In kasta oo xaaladaha cimilada ee xun ay sanadkii hore, 24 [More ...]
Dowlada hoose ee magaalada Bal Metrokesir, qulqulka taraafikada ee bartamaha magaalada si loo hubiyo badbaadada baabuurta iyo dadka lugeynaya ee wadooyinka iyo isgoysyada jidadka isgoysyada iyo khadadka gawaarida ayaa sameynaya shaqo dayactir. Kooxaha, Isgoysyada dadka lugeynaya [More ...]
Mashruuca Joojinta Bilecik
Degmada Bilecik iyo Agaasinka Waxbarashada Qaranka oo loo diyaariyey iskaashi lala yeesho mashruuca '' Xisaabta ee Joogsiga '' ayaa la soo bandhigay. Xarunta Dhaqanka ee Şeyh Edebali iyo Xarunta Kongareeska, xafladda dhiirrigelinta ee lagu qabtay joogsiga; Ku-xigeenka Duqa Melek Mızrak Subaşı, Qaranka [More ...]
Duqa magaalada 13-15 Ekrem Yüce, oo ka hadlayey shir jaraa'id ka hor tartankii MTB Cup Sakarya XCO-XCM ee lagu qaban doono Sakarya inta u dhaxaysa Sebtember, ayaa yidhi, olarak Maaddaama Magaalo-Weyne, waxaan sii wadaynaa inaan taageerno baaskiil wadista. Hadafkayagu waa [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso sidii loo fududeyn lahaa gaadiidka dadweynaha. Macnaha guud, 2019 wuxuu furay Maarso Gebze - Halkalı Muwaadiniinta Gebze Fatih iyo saldhigyada tareenka ee Çayırova ee ku yaal khadka Marmaray waxay ku sii jeedaan dhinaca D-100. [More ...]